प्रविधी – Hamropati.com
एनालग च्यानल बन्द गर्न सर्वोच्चले खोल्यो बाटो, अब डिजिटल मात्रै चल्ने
By on February 19, 2018 प्रविधी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनागल प्रविधिको टीभीलाई बन्द गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । सर्वोच्चले यस अघि तत्कालका लागि एनालग टीभी बन्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्चका न्यायाधीसद्वय चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले यस अघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछी एनालग टीभीलाई पूर्ण रुपमा बन्द गरी डिजिटल केवल टीभी संचालनको […]
By on February 15, 2018 प्रविधी
अपराधीलाई पहिचान गर्नसक्ने चश्मा पुलिसलाई दिएमा के होला ? अवश्य पनि अभियुक्तहरु भटाभट पक्राउ पर्ने थिए र अपराधका घटनामा कमी आउने थियो । चीनमा पुलिसहरुले अपराधी पहिचान गर्नसक्ने स्मार्ट चश्मा लगाउन सुरु गरेका छन् । हाइटेक फेस रिकग्निसन प्रविधियुक्त खुफिया क्यामरा भएको चश्मा पुलिसलाई दिन सुरु गरिएको छ । यो चश्माको सहायताले प्रहरीलाई कसूरदार पहिचान गर्न […]
एक रुपियाँ डाउन पेमेन्ट गरे स्मार्टफोन किस्ताबन्दीमा पाइने
By on February 14, 2018 प्रविधी
काठमाडौं, १ फागुन । काठमाडौंको सुन्धारास्थित सिटिसी मलको चौथो तल्लामा रहेको ईजी मोबाइल केयरले फोन खरिदकर्ताहरूका लागि किस्ताबन्दीमा विभिन्न ब्राण्डका मोबाइल दिने योजना ल्याएको छ । योजना अनुसार ग्राहकले सामसङको जे सेभेन म्याक्स मोडलको स्मार्टफोन एक रुपैयाँ तिरेर लैजान पाउने छन् । फोनको बजार मूल्य २८ हजार २९० रुपैयाँ छ । कम्पनीले ल्याएको किस्ताबन्दी अफर […]
मोटरसाइकलमा पनि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान सुरु,कति लाग्छ शुल्क ?
By on February 13, 2018 प्रविधी
काठमाडौं, फागुन १ – प्रदेश नम्बर ३ मा दर्ता भएका दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान जडान सुरु भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबारदेखि दुई पांग्रे सवारी साधनमा समेत इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान सुरु गरेको हो । विभागको सूचना अनुसार नम्बर प्लेट जडानका लागि अनलाइन फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। फर्म भरेपछि इम्बोस्ड नम्बर […]
चौधौं वार्षिकोत्वसको अवसरमा टेलिकमले ल्यायो छुटै-छुटको अफर
By on February 5, 2018 प्रविधी
काठमाडौं,माघ २२ – नेपाल टेलिकमले १४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न छुट योजना सार्वजनिक ल्याएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा टेलिकमले विभिन्न छुट योजनाको घोषणा गरेको हो । घोषणाअनुसार टेलिकमले एडीएसएल सेवाको गति माघ २५ देखि ५ एमबीपीएसमा स्तरोन्नति गर्ने जनाएको छ । यस्तै क्रस बिल्डिङ अन्तर्गत माघ २५ देखि तीन महिनाका लागि एडीएसएल सेवामा रिचार्ज गर्दा […]
टेलिकमले सुरू गर्यो सापटी सेवा
२२ माघ काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकको लागि ब्यालेन्स सकिँदा सापटी दिन सुरु गरेको छ । टेलिकमले आफ्नो १४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘नमस्ते क्रेडिट सेवा’ नाम दिएर यस्तो सुविधा ल्याएको हो । प्रिपेड कार्डबाहक ग्राहकले अब फोन गर्दा गर्दै पैसा सकिएमा पनि कुरालाई निरन्तरता दिन पाउने छन् । यसअघि नेपालमा सञ्चालीत अर्काे टेलिकम्युनिकेसन् कम्पनी एनसेलले मात्रै […]
सबैभन्दा बढी फेसबुकबाटै ठगिन्छन् युवायुवती
By on January 26, 2018 प्रविधी
सामाजिक सञ्जा‍लमार्फत अपराध बढ्यो,
माघ १२, २०७४ काठमाडौं : नेपालमा पछिल्लो समय फेसबुकमार्फत हुने साइबर अपराधका घट्ना बढ्दै गएको तथ्याङ बाहिर आउन थालेको छ। सञ्‍चारमा आएको विकासले विश्व नै एकगाउँ बनेको बेला यसको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा आपराधिक घटना निम्त्याउँदै गएको अपराध महाशाखा टेकुका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिवेश लोहनीले बताए। विद्युतीय उपकरणहरू कम्प्युटर, मोबाइल, तथा यसको नेटवर्कका माध्यमबाट हुने […]
बानेश्वर आसपासका चार स्थान ‘फ्रि वाइफाइ जोन’
By on January 24, 2018 प्रविधी
१० माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको १० नम्बर वडा कार्यालयले चहलपहल बढी हुने ४ वटा सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा सुरु गरेको छ । बुधबार एक कार्यक्रमबीच महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले, छक्कुपक्कु मन्दिर (बानेश्वर पार्क), सानो गौचरन, थापागाउँ चोक र बुद्धनगर सेतो गणेश मन्दिर चोकमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा थालनीको थालनी गरे । यि क्षेत्रलाई वडा […]
सरकार सटडाउनका कारण अमेरिकी दूतावासको फेसबुक र ट्वीटर अपडेट बन्द
By on January 22, 2018 प्रविधी
अमेरिकी सरकार सटडाउनका कारण काठमाडौंमा रहेको अमेरिकी दूतावासको फेसबुक र ट्वीटरमा अपडेट बन्द भएको छ । दूतावासले फेसबुक र ट्वीटरमा सुचना राखेर नियमित अपडेट बन्द भएको जानकारी दिएको हो । दूतावासको फेसबुक र ट्वीटर नियमित रुपमा अपडेट हुँदै आएको थियो । तर अब सरकार नखुल्दासम्मका लागि अपडेट बन्द गरिएको छ । साथै सरकार सटडाउनका कारण […]
वैज्ञानिकले पत्ता लगाए मृत्युको भविष्यवाणी गर्ने प्रविधि
आफ्नो मृत्यु कहिले हुन्छ ? कसैलाई थाहा हुँदैन । मृत्युको ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्ने विधि दुनियामा अहिलेसम्म विकास भएको छैन । तर अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले भने मृत्युको भविष्यवाणी गर्ने प्रविधिको विकास गरेका छन् । क्यालिफोर्नियास्थित स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले यस्तो प्रविधिको विकास गरेको दाबी गरेका छन् जसले कुनैप्नि मानिसको मृत्यु कहिले हुन्छ ? भनेर ९० प्रतिशत सम्म सही […]